Sida loo go'aamiyo haddii waalidkaa da'da ah ay ka faa'iideysan karaan taageero yar oo dheeraad ah - Meals on Wheels
Sida loo go'aamiyo haddii waalidiintaada da'da ah ay ka faa'iideysan karaan xoogaa taageero dheeraad ah
Ciidaha waa wakhti dib loo isugu soo laabto oo loo dabaaldego, sida inbadan oo naga mid ah iyo u safraya si aan u aragno kuwa aad jeceshahay - mararka qaarkood markii ugu horeysay bilo. Intaad ku wada raaxeysanaysaan shirkad kasta oo kale, waxaad sidoo kale yeelan kartaa fursad aad ku hubiso si aad u aragto sida waalidiintaada gabowday ama dadka kale ee kuugu dhow ay u sameynayaan maalin-maalin.
Waxay noqon kartaa fursadii aad sugeysay inaad isugu timaado qoys ahaan oo aad si qoto dheer u qiimeyso in Hooyo, Aabe, Ayeeyo ama Ayeeyo, ay ka faa'iideysan karaan gargaar yar. Isku soo wada duubashada waqtiga waxay kaa caawin kartaa inaad hesho sawir cad oo ku saabsan waxa dhacaya iyo wadahadal qoys oo ku saabsan adeegyada laga yaabo inay wax u fududeeyaan qofka aad jeceshahay sanadka soo socda.
"Waqtiga fasaxa qoysku waa fursadda ugu fiican ee lagu qiimeeyo caafimaadka, nabadgelyada iyo ladnaanta dadka waaweyn ee weli ku nool guryahooda si madax-bannaan," ayuu yiri Deb Taylor, oo ah madaxa Adeegyada Bulshada ee Waayeelka ah, oo ah hay'ad samafal maxalli ah oo u doodda dadka waayeelka ah kana caawisa waayeelka iyo daryeelayaasha inay ilaashadaan madaxbanaanidooda iyadoo loo marayo adeegyo bilaash ah ama qiimo jaban.
Iyada oo gacan ka heleysa Taylor iyo xubin ka mid ah kooxdeeda shaqaalaha bulshada ee Adeegyada Bulshada ee Waayeelka ah, waxaan soo diyaarinnay lixda shay ee la doonayo in la raadiyo haddii aad ka walaacsan tahay ladnaanta waalidiintaada gabowday ama kuwa kale ee aad jeceshahay:
1. Raadi isbeddellada muuqaalka. Miisaanka culus ama miisaanka oo kordha waxay calaamad u noqon kartaa cunno ama dhibaatooyin caafimaad oo aad u daran. Dhaawaca ayaa noqon kara calaamado dhicitaan ama dhaawacyo ka yimaada isku dheelitirnaan la'aanta. Calaamadaha gubashada waxay noqon karaan natiijada dhaawacyada karinta. Haddii qofka aad ka walwalsan tahay badanaa la isku daro, laakiin hadda uusan ka walwalin muuqaalkiisa ama muuqaalkeeda, waxay sidoo kale noqon kartaa sabab laga walwalo. Isbeddelka ku dhaca socodka qofka ama socodka ayaa sidoo kale calaamad u noqon kara inay wax khaldan yihiin. La soco muuqaalka qofka waqti ka dib, maadaama mararka qaarkood qofku awoodi karo inuu qariyo dhibaato culus dhowr saacadood.
2. Sidee buu gurigu u egyahay? Haddii qofka aad jeceshahay uu had iyo jeer ilaaliyo waxyaalaha shaashadda oo aad ogaatid in taasi sidaa ahayn, waxay calaamad u noqon kartaa in dhibaatooyinka jireed ama xannibaadda dhaqaale ay ka hor istaageyso inay sii socdaan. Calaamadaha digniinta waxaa ka mid ah aaladaha badanaa la isticmaalo ama alaabta guriga ee u baahan hagaajinta, tuubbooyin dharka lagu dhaqo oo aan la qaban ama socod la'aan ama socod la'aan. Haddii aad dareento urta kaadida, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa ceshad la’aan, taasoo sababi karta xoogaa xishood laakiin waa dhibaato guud oo ku dhacda dadka waaweyn.
3. Hubi calaamadaha nafaqada liidata. Haddii aad ka welwelsan tahay qofka aad jeceshahay inuu helo cunto caafimaad leh oo ku filan, hubi haddii qaboojiyaha ama khaanadaha ay yaallaan. Xitaa haddii khaanadaha iyo qaboojiyaha ay buuxsamaan, joogitaanka waxyaabo badan oo duugoobay ah waxay astaan u noqon kartaa in qofka aad jeceshahay ay dhibaato ka haysato karinta ama helitaanka cunto caafimaad leh. Fuuqbaxu wuxuu walwal weyn ku noqon karaa waayeelka sidoo kale, markaa haddii aad waqti dheer la qaadatid qofka aad jeceshahay, isha ku hay inta biyo ah ee uu cabayo ama ay cabayaan.
4. Weydii wax ku saabsan daawooyinka. Qofka aad jeceshahay miyuu ku dhaqmayaa jadwalka daawooyinka? Tani waxay noqon kartaa mowduuc shaqsiyeed, sidaa darteed waxay kuxirantahay heerkaaga raaxada ee qofka aad ka walwalsan tahay. Iskuday inaad ufududdo wadahadalka adoo kahadlaya daawooyinka aad qaadan karto. Haddii ay dhacdo inaad ku aragto daawooyinka dhacay guriga dhexdiisa, waxay noqon kartaa inuu qofka dhib ku qabo xusuusashada inuu qaato ama waxaa laga yaabaa inuu wajaho dhibaatooyin dhaqaale oo xagga bixinta daawooyinka ah.
5. La soco isbeddelada shakhsiyadeed. Qofka aad jeceshahay ma umuuqdaa mid fog ama ka noqday? Ama waxaa laga yaabaa in dabeecadda qofka kaliya aysan ku habboonayn qaababkii hore. Waxa laga yaabaa inaad aragto inuu qofku ku jahwareersan yahay hawlihii hore loogu arki jiray. In kasta oo ay jiri karaan sharraxaad kala duwan oo ku saabsan isbeddelada dabeecadda, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa inay wax qaldan yihiin.
6. Calaamadaha halganka dhaqaale. Ka dib markaan si adag u shaqeynayay sannado badan si aan u masruufo qoysaskooda, runtii way ku adkaan kartaa waalidiinta da'da ah inay weydiistaan caawimaad markay dhibtoonayaan. Calaamadaha in dadka aad jeceshahay laga yaabo inay ku dhibtoonayaan dhaqaale waxaa ka mid noqon kara warqado furan ama biilal, ama jeegag soo boodaya. Bedelida qorshooyinka bulshada si looga fogaado lacag bixinta waxay sidoo kale calaamad u noqon kartaa loolan dhaqaale. Dhibaatooyinka dhaqaale sida ku guuldaraysiga bixinta biilasha ama ilaawista inaad fayl gareyso waqtiga canshuurta sidoo kale waxay la xiriiri kartaa luminta xusuusta.
Waxaa jira sababo dhowr ah oo laga yaabo inuu qofku ka walwalo dadka uu jecel yahay, laga bilaabo caafimaadka jirka iyo maskaxda si looga walwalo dhaqaalaha. Warka fiicani waa in haddii aad qabtid mid ka mid ah welwelkaan, ay jiraan ilo badan oo halkaa ka jira oo lagu caawin karo. Inkasta oo kuwa aad jeceshahay laga yaabo inay ka walaacsan yihiin inay ka baxaan guryahooda haddii ay dhibtoonayaan, ogow inay jiraan adeegyo badan oo taageero ah oo ka caawin kara dadka waaweyn inay ilaashadaan madax-bannaanidooda.
Qoraalkani waa kii ugu horreeyay ee taxane ah oo seddex ah oo ku saabsan daryeelka waalidiinta da'da ah. Eeg Qeybta 2: Maxay yihiin ilaha ay heli karaan kuwa daryeela waalidiinta da'da ah? iyo Qaybta 3: La yeelashada wadahadalka waalidiintaada gaboobay ee ku saabsan helitaanka caawimaad guriga.
Diisambar 18, 2014